Qarax Khasaaro dhaliyay oo Ciidamada Kenya lagu eegtay Magaalada Mandheera | KEYDMEDIA ONLINE
Qarax Khasaaro dhaliyay oo Ciidamada Kenya lagu eegtay Magaalada Mandheera
NAIROBI (Keydmedia)-Wararka ka imaanaya Magaalada Mandheera Gobolka NFD ee Xadka ay wadaagaan Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxay sheegayaan in halkaas uu ka dhacay Qarax weyne oo Khasaaro geystay.
Qaraxa oo ahaa Miinada Dhulka lagu aaso ayaa waxay ka qaraxday goob ay fariisin u ahayd Ciidamada Dowladda Kenya ee Xadka magaalada Baladxaawo iyo magaalada Mandheera ee Gobolka Waqooyiga Bari ee Kenya NFD.
Inta laxaqiijiyey Qaraxaasi waxaa ku geeriyooday labo ka tirsan Askarta Ciidamada Dowladda Kenya oo halkaasi fariisin ku lahaa 4 kalena dhaawacyo Culus oo kala duwan ayaa ka soo gaaray sida ay inoo xaqiijiyeen qaar ka mid ah dadka deegaanka.
Qaraxa markii uu dhacay kaddib ayaa waxaa goobta soo gaaray Ciidamo fara badan oo ah Militariga Kenya, kuwaas oo Howlgallo baaritaanno ah ka sameeyay halkaasi inkastoo aan la sheegin tirada inta ay la egtahay dadka ay u qab qabteen Qaraxaasi.
Inta badan Qaraxyada ka dhaca Xadka ay wadaagaan Dalal Soomaaliya iyo Kenya waxaa Mas’uuliyaddiiisu sheegtay Kooxda Al-Shabaab inkastoo aysan wali Qaraxan war ka soo saarin.